Covid-19 ကူးစက်မှုနည်းလမ်းသစ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ (၅) ချက် - News @ M-Media
in က်န္းမာေရးႏွင့္ေဆးပညာ / ႏိုင္ငံတကာသတင္း — July 9, 2020
-လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်ပြီး လေထဲမှာ လွင့်မျောနိုင်တဲ့ အမှုန်စက် (Aerosol) ကနေတစ်ဆင့် Covid-19 ကူးစက်နိုင်တယ်လို့ နိုင်ငံ ၃၂ နိုင်ငံက သိပ္ပံနဲ့ သုတေသနပညာရှင် ၂၃၉ ဦး တနင်္လာနေ့မှာ လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကလည်း အင်္ဂါနေ့မှာ ဒီကိစ္စကို အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
အမှုန်စက်နေ ကိုဗစ်ကူးစက်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသိကောင်းစရာ ၅ ချက်ကို M-Media ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ လေကတစ်ဆင့် ကူးစက်မှုဆိုတာ ဘာလဲ?
Covid-19 ရောဂါဟာ ပါးစပ်နဲ့ နှာခေါင်းကနေ ထွက်ပြီး အောက်ကို အလျင်အမြန်ကျတဲ့ အရည်စက် (Droplet) တွေကနေ ကူးစက်တတ်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO က အရင်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သိပ္ပံပညာရှင်တွေ၊ သုတေသန ပညာရှင်တွေက လူတွေ အော်ဟစ်တာ၊ သီချင်းဆိုတာမျိုးကနေ ထွက်လာပြီး လေထဲမှာ လွင့်မျောနိုင်တဲ့ အမှုန်စက် (Aerosol) တွေကနေတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ အထောက်အထားတွေ တွေ့လာရတယ်လို့ တစ်စိုက်မတ်မတ် ထောက်ပြလာကြပါတယ်။
၂။ အရည်စက် (Droplet) နဲ့ အမှုန်စက် (Aerosol) ဘာကွာလဲ?
ချောင်းဆိုးတာ၊ နှာချေတာကနေထွက်တဲ့ Droplet တွေဟာ အချင်း ၅ မိုက်ခရိုမီတာကနေ ၁၀ မိုက်ခရိုမီတာအထိ ရှိပြီး ၃ ပေကနေ ၆ ပေ အကွာအဝေးထိသာရောက်ကာ အောက်ကိုကျတာ​ပါ။ အချင်း ၅ မိုက်ခရိုနီတာထက်သေးတဲ့ Aerosol အမှုန်လေးတွေကတော့ ၆ ပေကျော်တဲ့ အကွာအဝေးအထိ လေထဲမှာ လွင့်မျောသွားနိုင်ပါတယ်။
ယူကေက ဆေးဝါးဇီ၀ဗေဒပညာရှင် စတီဖနီဒန်ဆာက Droplet နဲ့ Aerosol နှစ်ခုစလုံးမှာပါတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ဟာ ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်းမှာ ၃ နာရီလောက် အသက်ရှင်တာကိုတွေ့ရပြီး အပြင်မှာတော့ အပူချိန်၊ စိုစွတ်မှုတွေ၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၊ လေထဲက အခြားအမှုန်တွေနဲ့ ထိတွေ့မှု စတဲ့အခြေအနေတွေအပေါ် မူတည်ပြီး ရှင်သန်ချိန် အပြောင်းအလဲရှိနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“Aerosol တွေဟာ အခန်းအတွင်းမှာတောင် ၆ မီတာ (၁၈ ပေ) လောက်အထိ မျောပါနိုင်ပါတယ်။ အပြင်မှာ လေတိုက်တာတွေ ဘာတွေနဲ့ဆိုရင် ဒီထက်တောင်ပိုပြီး ဝေးဝေးရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ဝေးဝေး ရောက်နိုင်လဲဆိုတာက Aerosol ရဲ့ အရွယ်အစားအပေါ် မူတည်ပါတယ်”
၃။ လေထဲကနေ Covid-19 ဘယ်လိုကူးလဲ?
အရည်စက် (Droplet) လိုပဲ အမှုန်စက် (Aerosol) တွေကလည်း အသက်ရှုတာ၊ စကားပြော၊ ရယ်မောတာ၊ နှာချေတာ၊ ချောင်းဆိုးတာ၊ သီချင်းဆိုတာ၊ အော်ဟစ်တာ စတဲ့အခြေအနေတွေကနေ ထွက်တက်ပါတယ်။
အသက်ရှုတာကနေထွက်တဲ့ အမှုန်စက်လောက်က ဝေးဝေးမသွားနိုင်ပေမယ့် အော်ဟစ်တာ၊ သီချင်းဆိုတာ၊ ​ချောင်းဆိုတာနဲ့ နှာချေတာမျိုးလို အခြေအနေမျိုးတွေကနေထွက်လာရင် ပိုဝေးဝေးရောက်နိုင်တယ်လို့ ဒန်ဆာက ပြောပါတယ်။
“အမှုန်စက် တစ်စက်လောက်မှာ ကူးစက်နိုင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်မျိုး မပါဝင်ပေမယ့် အသက်ရှုရာကနေ အမှုန်စက်တွေ များလာတဲ့အချိန် ပါးစပ်၊ နှာခေါင်းနဲ့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းတွေမှာ အမှုန်စက်တွေ သွားစုပြီး ကူးစက်နိုင်ပါတယ်”
အမှုန်စက်ကနေ ကူးစက်မှုဟာ လူနာတွေနဲ့ အမြဲတမ်း ထိတွေ့နေတဲ့ ကျန်းမာရေး​ဝန်ထမ်းတွေအတွက် ကူးစက်နိုင်မှုအန္တရာယ်လည်း ပိုမိုမြင့်တက်လာစေပါတယ်။
၄။ အမှုန်စက်​ကြောင့် ကူးစက်မှုအတိုင်းတာ ဘယ်လောက်ရှိလဲ?
အမှုန်စက် (Aerosol) ကနေတစ်ဆင့် ကူးစက်မှုဟာ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ ရှိနိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက် လက်ရှိမှာ အဖြေမရှိသေးပါဘူး။
အရည်စက် (Droplect) တွေကနေတစ်ဆင့်သာ ကိုဗစ်ကူးစက်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO က အချိန်အတော်ကြာ လက်ခံခဲ့ပေမယ့် အမှုန်စက် (Aerosol) ကနေ ကူးစက်မှု အထောက်အထားတွေကို အများအပြားတွေ့လာရကြောင်း အခုတစ်ပတ်မှာ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
WHO ရဲ့ ကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်တားဆီးရေး နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ ဘန်နီဒက်တာ အလီဂရန်ဇီက လူများတဲ့နေရာတွေ၊ အလုံပိတ်အ​ဆောက်အဦးတွေ၊ လေဝင်လေထက် သိပ်မကောင်းတဲ့ နေရာတွေမှာ အမှုန်စက်တွေကနေတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်ချေရှိတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နှာခေါင်းစည်း အမြဲတမ်းတပ်တာ၊ လူတွေနဲ့ ခပ်ခွာခွာနေတာ စတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေကို အမြဲတမ်း ကျင့်သုံးသွားရမယ်လို့ ပညာရှင်တွေက တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
အများပြည်သူသုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုင်းတွေကို လူများတဲ့နေရာတွေကို ရှောင်ရှားဖို့ လိုအပ်သလို၊ ကျောင်းတွေ၊ ရုံးတွေနဲ့ ဆေးရုံတွေမှာ လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်လုပ်တာက ကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင် မလုပ်နိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာတော့ လေစစ်ဇကာတွေ၊ လေသန့်စင်စက်တွေ ထားရှိဖို့လည်း ပညာရှင်တွေက အကြံပြုထားပါတယ်။